अनायासका पानाहरु : 2014
आँखामा सपना बोकेर अनि रहर बोकेर
मंन्जिल पुरा हुदैन कहिल्यै पत्थर ढोगेर
जव साहस आउछ अनि मात्र शिखर चढीन्छ
कहाँ गन्तब्यमा पुगिन्छ बारम्बार सफर सोधेर
हिजो उसले बा आमाको सपना पुरा गर्छु भन्थ्यो
आज बीच बाटो बाटै फर्किएको छ डर सोचेर
उ सधै चर्चामा आउँन खोज्छ समाचार पढेर
नाम दाम कमाउछ अर्काको खबर चोरेर
@रामकृष्ण पौडेल 'अनायास'
Posted by ramkrishna at 11:47 PM No comments:
मझेरीमा एकै छिन भलाकुसारी गर्दै
मझेरी भलाकुसारी, अंक १७ (रामकृष्ण पौडेल अनायास)
Sun, 12/07/2014 - 20:33
मझेरी भलाकुसारीमा स्वागत छ रामकृष्णजी ! पहिले त आफ्नो परिचय दिनुस् न!
धन्यवाद कुमार सर । मैले आफ्नो बारेमा भन्नु पर्दा आफूलाई साहित्यप्रेमी, साहित्यको बारेमा केही सिक्दै गरेको विद्यार्थी हुँ भन्न रुचाउछु । स्कुल जीवनदेखि साहित्यलाई माया गर्दै आएँ र सारिक हुदै आएँ । गाउँ समाजमा कुनै व्यक्तिको दुख समस्या देख्न नसक्ने हुनाले धेरै संघर्ष पनि गर्दै आएँ । म कहिल्यै असत्यको पछाडि लागिन । सधै सत्यलाई साथ् दिदै पनि आएको छु । हुन सक्छ मलाई त्यसैले धेरै कुराले भावुक बनाएर पनि होला फाट्ट फुट्ट साहित्यमा कलम चलाएको । आँखाले देखेका कुराहरूमा थोरै घुमाएर कलात्मक तवरले मझेरी र अन्य पत्र-पत्रिकामार्फत पाठक सामु पुर्याउन कोसिस गरेको छु ।
मैले हालसम्म गजल विधा, कविता, कथामा कलम चलाउदै आएको छु । पछिल्लो समयमा चितवनबाट पहिलो भन्नु पर्छ गजलमा सवाल-जवाफ ''धमिलिएका डोबहरू ''कृति बजारमा आएको छ पाठकले निकै रुचाइदिनु भयो खुशी पनि छु ।
स्थायी बसोबास भरतपुर -१३, कविडाँडा कैलासनगर चितवनमा जन्मिए र कविडाँडाको माहोल साहित्यमा निकै नै तातिरहेकोले मलाई त्यो माहोलले छुटाउन सकेन । त्यसैले पनि चितवनका सामाजिक र साहित्यिक बिबिध संघ-संस्था
- गजलमन्च चितवन
- कविडाँडा साहित्य समाज
- समर्पण साहित्य परिषद
- अभिब्यन्जना साहित्य प्रतिष्ठान
- हाम्रो मझेरी साहित्य परिषद,
आदिमा संलग्न छु । र बिगत ११ वर्ष अगाडिबाट आफूलाई साहित्यको महायज्ञमा पुजारीको रुपमा सरिक गराएको छु ।
यो साहित्यिक नाम "अनायास" किन रोज्नुभयो?
साहित्यिक नाम अनायास रोज्नुको कारण मेरो मस्तिष्कमा अनायासै रचनाहरू फुर्ने भएकाले जुनसुकै समयमा पनि कहिलेकाहीँ शब्दहरू फुर्ने गर्छन् । त्यसैले मैले आफ्नो नाम पछाडि अनायास राख्न रुचाएको हो ।
गजलको क्षेत्रमा जल्दोबल्दोसँग लागिरहनुभा'छ; त्यो ऊर्जा कसरी आउँछ?
वास्तवमा जल्दो बल्दोसँगभन्दा पनि साहित्यले नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्छ । त्यसैले साहित्यमा लाग्नु ठिक हो । अनि साहित्य भनेको हृदयको कलात्मक अभिव्यक्ति हो । आफूले गरेका रचनालाई बाहिर ल्याउन वा साहित्यको सम्रक्षण गर्नका निम्ति पनि हो र साहित्य क्षेत्र भनेको सकारात्मक सोचको विकास गर्ने एउटा सत्संगत् वा महायज्ञ हो । त्यसैले पनि आफू र समाज विकासका निम्ति रचना मार्फत नै केही गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रकृतिमा भएका कुराहरू टपक्क टिपेर देश र जनताले भोगेका, अनि देश दुखेका माया प्रेम मिलन बिछोडका कुराहरू आदिलाई शब्दका मार्फत सानो क्रान्तिको थालनी गर्न खोज्दा यो क्षेत्रमा जल्दोबल्दो तरिकाले लागेको देख्न सक्नुभएको हुनसक्छ । सायद ऊर्जा कसरी आउँछ भन्ने कुरामा चाहिं यिनै बिबिध गतिबिधि, जहाँ अन्याय हुन्छ, जहाँ समस्या पर्छ, जहाँ पीडाको अनिभूति हुन्छ र खुशीको पल हुन्छ यस्तै पलहरूले नै शब्द भोर्ने ऊर्जा प्रधान गर्दछ ।
के कस्ता साहित्यिक गतिबिधिहरू गरिरहनुभएको छ?
बास्तवमा चितवन र कविडाँडा साहित्यको उर्वरभूमि हो । यहाँ साहित्यको भेल चैत बैसाखको खडेरीमा पनि उत्तिकै उर्लिरहेको हुन्छ । त्यसैले हरेक दिन हरेक हप्ता हुने विभिन्न कार्यक्रममा विशेषत आयोजकको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आइरहेको छु र अन्य कार्यक्रममा उपस्थिथि पनि जनाउदै आइरहेको छु । त्योभन्दा पनि हाल साहित्यमा एउटा नराम्रो बिकृति हाबी भएको छ - साहित्यमा गुट, उपगुट र राजनीतिक भातृ संगठन जस्तो बन्दै गइरहेको छ । यस्तो बिकृतिबिरुद्ध म साहित्यिक क्रान्ति पनि गरिरहेको छु । साहित्यमा पैसा भएका व्यक्ति मात्र अगाडि बढ्ने जस्तो देखिन थालेको छ । आर्थिक रुपमा कमजोर श्रष्टाका राम्रा सिर्जनाहरू अगाडि ल्याउन म भरपुर कोसिसमा छु ।
हाल बजारका महंगा होटलमा रक्सीको मातसँगै कार्यक्रम हुन्छन । सम्मान पुरुस्कार एक आपसमा साटासाट, ऐचो, पैचो गरे जस्तो गरी विभिन्न गतिबिधिहरू भैरहेको छन् । यस्ता गतिबिधि रोकेर नव-सर्जकदेखि लिएर ठुला श्रष्टासम्म पच्ने प्रकारका गतिबिधि गरी साहित्यलाई सुद्ध रुपले अगाडि बढाउन अग्रजप्रति विनम्रता गर्दै एउटा राम्रो सिर्जना र श्रष्टाको उचित मूल्यांकन गर्दै साहित्यको जगेर्ना गर्न अनूनय गरिरहेको छु अग्रजप्रति ।
पाठकहरूले कस्तो लेखकको रुपमा आफूलाई चिनून् जस्तो लाग्छ ?
पाठकले आफूलाई कस्तो रुपमा लिन्छन भन्दा पनि म आफै राम्रो पाठक बन्न सकुँ । अन्य पाठकले यो कुसल पाठक हो भनेर चिन्दा नै म सन्तुष्ट हुने थिएँ । श्रष्टा र सिर्जनाको लागि भगवान भनेको पाठक नै हो ।
मनपर्ने र प्रेरणादायक लेखकहरूको नाम लिनुपर्दा कसलाई सम्झनुहुन्छ ?
साहित्य सिर्जना, लेख, विचार, बिश्लेषण कसैको नराम्रो हुँदैन ।त्यसैले केही त केही कुरा दिइराखेको नै हुन्छ । यदि उक्त सिर्जनाबाट रस स्वाद लिन सक्यो भने सबै सिर्जना उत्कृस्ट हुन् जस्तो लाग्छ । तर आफैले चिन्न बुझ्न र स्वाद लिन जानेन भने त्यसको गुण बारे अनभिज्ञ हुन्छ । त्यो उसको लागि नराम्रो हुन्छ । त्यसैले सबै श्रष्टाका सबै लेखकका कृति रचना उत्तिकै उत्कृस्ट लाग्छ मलाई । अनि एउटा लेखकले आफ्नो लेख कृति उत्तिकै माया पनि गरेको हुन्छ । त्यसैले मैले एक दुई जना लेखकको नाम लिए भने अन्य लेखकमाथि अन्याय हुनेछ । त्यसैले मेरो प्रेरणा भनेको सबै लेखकका राम्रो सृजना र राम्रो सिर्जनाका लेखक नै हुन् ।
अबको ५-१० वर्षपछि कस्तो लेखक/साहित्यकर्मीको रुपमा आफूलाई उभ्याउन चाहनुहुन्छ ?
मैले अगाडि पनि कुरा उठाइसकेको छु र यही कुरा भगवानसँग पनि भन्छु मलाई पहिला कुसल पाठक बन्ने शक्ति प्रदान गरुन । त्यसपछि मात्र अरु कुरा सोच्ने छु । सर्बप्रथम एउटा कुशल पाठक नै बन्न सक्दैन, अध्ययन र साधना गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्ति कहिल्यै लेखक बन्न सक्दैन । यी कारणहरूमा म पोख्त भए भने म समाजको चित्रण गर्न सक्ने विम्बका रुपमा उभिन चाहन्छु ।
चितवन तथा नेपालभरि कस्ता साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सरिक भइरहनुहुन्छ ?
आफूलाई प्रेरणा मिल्ने खालका र व्यक्ति, गुट, राजनीतिक विशेष कार्यक्रम बाहेक जुन कार्यक्रमले एउटा सही साहित्य, सही रचना र स्रस्टाको सम्मान गर्छ त्यस्ता कार्यक्रममा जान रुचि लाग्छ ।
आफू नजिकका अन्य स्रष्टाहरू को हुनुहुन्छ ?
मेरो लागि टाढाको कोही पनि हुनु हुन्न मैले यति धेरै अग्रज, सहकर्मी सहपाठी श्रष्टाबाट माया पाएको छु । त्यो नै मैले साहित्य जीवनमा कमाएको सम्पति हो । त्यसैले म कसैलाई टाढाको सोच्दिन ।
विश्वलाई नै अगाडि बढाउनको निम्ति इन्टरनेटलेठुलो भूमिका खेलेको बेलामा हामीले प्रयोग गर्न जानेनौ भने हामी धेरै पछाडि पर्छौ । त्यसैले नि म प्राय इन्टरनेटमा धेरै समय बिताउछु । यदि इन्टरनेट नभइदिएको भए सायद अचेल दिन बिताउन पनि सक्दिन थिएँ होला जस्तो लाग्छ । वास्तवमा मेरो पहिलो प्रेरणाको स्रोत पनि ई पत्रिका र यसमा कार्यरत मित्रहरू नै हो । हामी जस्ता साहित्यप्रेमीका लागि उचित स्थान र उचित सम्मान दिने एउटै थलो हो र समालोचक पनि हो ईपत्रिका ।
त्योभन्दा पनि मझेरी मेरो प्रमुख माध्यम हो । मेरो नभएर नेपाल र बिदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक स्रस्टाको उचित सम्मान र स्थान दिन सफल एक ईपत्रिका मझेरी नै हो । मझेरी सबैको प्रेरणाको स्रोत स्रस्टाको समालोचक पनि हो । यहाँ आजसम्म ३०१३८ जना श्रष्टाको जम्काभेट छ । ती श्रष्टाको सृजनामा आफ्नो रचना कुन स्थानमा छ त्यो जान्ने अवसर प्रधान गरेको छ ।
सबैसँग नजिक हुने मौका पाएको छु, मेरो लागि अगाडि बढ्ने स्रोत बनेको छ ।
भविष्यमा साहित्यिक योजनाभन्दा पनि समयले साथदिएको खण्डमा एउटा साहित्यिक ट्रस्ट खोल्ने र आर्थिक रुपले कमजोर श्रष्टाका कृति प्रकाशन गरी उचित सम्मान दिने सोच हो । आफूले पनि कृति प्रकाशन गर्ने र साहित्यिक सस्थामा बसेर केही साहित्यका लागि टेवा पुग्ने राम्रा गतिबिधि गर्ने ।
तपाईं गत करीब चार वर्षदेखि मझेरीमा करिब १२० रचना प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ । यी रचनाहरूलाई पुस्तको रुपमा आकार दिने बारे सोच्नुभाछ?
चितवनबाट नै पहिलो भन्नु पर्छ गजलमा सवाल जवाफ कृति ''धमिलिएका डोबहरू''प्रकाशित गरेका छौ मैले र सहकर्मी जमुनाजीले भएर । अबका दिनमा पनि एउटा कथा र कविता कृति प्रकाशित गर्ने सोच छ मेरो ।
मझेरीलाई कस्तो रुपमा हेर्नुभएको छ ? यसलाई अँझ प्रभावकारी हुन के गर्नुपर्ला ?
मझेरी सबै साहित्यकार, श्रष्टाको साझा थलो र माया प्रेम मिलन बिछोड अनि कतै मन दुखेका कुरा त कतै मुटु साटेका कुरा एक आपसमा साटासाट गर्ने हाम्रो अभिभावक बनेको छ । अँझ त झन् नव सर्जकका लागि एउटा प्रमुख भूमिका नै खेलेको छ र मझेरीलाई आझै प्रभावकारी बनाउन वर्षको एउटा साहित्य संग्रह निकाल्ने अनि जेष्ठ अग्रज स्रस्टाको सम्मान गर्दा मझेरी सबैको मन मस्तिष्कमा अमिट छाप बनी बसी राख्ने थियो ।
मझेरीमा विशेष गरी कुन लेखकहरूको रचना पढ्ने गर्नुहुन्छ ?
मझेरीका प्रत्येक पाना र विधामा डुल्ने बानी छ मेरो त्योभन्दा पनि सबैका रचना उत्तिकै उत्कृस्ट लाग्छ र सबैको रचनामा आँखा पुगेकै हुन्छ ।
पहिलेको तुलना अलि पातलो रुपमा देखिन थाल्नुभएको छ । केही विशेष कारणहरू पनि छन् कि?
विभिन्न साहित्य संघ-सस्थामा कार्यरत छु र कार्यक्रम निकै नै गर्दै आएका छौ । त्यसैले पनि त्यतातिर बढी समय दिनुपर्ने र म वैवाहिक जीवनमा पनि प्रवेश गरेँ । अनि समय बाँडिदा हजुरलाई त्यस्तो लागेको पनि हुन सक्छ । तर मझेरी हेर्ने भने छुटाउदिन ।
संसारभरि छरिएर रहनुभएका लेखक-पाठकलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ।
निस्वार्थ भावानाले उत्प्रेरित भएर साहित्य लेखनमा लाग्नु होला । हजुरहरूका लेख रचनाको लागि नेपाली साहित्यको प्रतिनीधि मझेरी छँदैछ । रचना प्रकाशनका लागि मझेरीलाई आफ्नो सम्झेर पठाउनु होला । सही रचना र सही श्रष्टाको मूल्यांकन गर्नु होला । सधै साहित्यलाई माया गर्नु होला सक्नुहुन्छ साहित्य सिर्जना गर्नुहोला सक्नुहुन्न संरक्षण गरिदिनु होला ।
नेपाली साहित्यका लागि मझेरीले खेलेको भूमिका निकै प्रसंशायोग्य छ र सबैलाई समेट्न सफल होस् । कुमार सरप्रति आभारी छु । अनि कविडाँडामा रहनु हुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज, चितवनका सम्पूर्ण साहित्यकारज्यू, मेरो परिवार प्रति धेरै आभार प्रकट गर्दछु। मलाई यो क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्रलाई सम्झन चाहन्छु । साहित्यलाई सबैले माया गरिदिनु होला ।
रामकृष्ण पौडेल अनायासका रचनाहरू : यता http://www.majheri.com/taxonomy_vtn/term/2485
रामकृष्ण पौडेल अनायासका रचनाहरू (संक्षिप्त अंशसहित): यता http://www.majheri.com/taxonomy/term/2485
रामकृष्ण पौडेल अनायासको फेसबुक पेज : यता https://www.facebook.com/ramkrishna.poudel
Posted by ramkrishna at 2:56 AM No comments:
Labels: मझेरीले म संग लिएको अन्तर्वार्ता
पार्टी फुटाएर अनि बन्दुक उठाउछु भन्दै
सदन हल्लाएको छ कलम फुटाउछु भन्दै
गधा धोएर गाई बन्ने भए देखिन्थ्यो हेर
गयो मसाल बोकेर सम्बन्ध टुटाउछु भन्दै
साएद आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्दै छ उ
कुर्ची नपाए आफ्नै शरीर गुमाउछु भन्दै
जन्ताको मन परिवर्तन भैसक्यो उस्लाई के थाहा
खोक्रो भाषण गर्दै थियो जनमत जुटाउछु भन्दै /
Posted by ramkrishna at 9:48 PM No comments:
सरकारले कर्णालीमा नुन पठाउन सक्दैन भने
राहात मिल्दैन जन्तालाइ महंगी घटाउन सक्दैन भने
सुरक्षित छैनन् अचेल बाबु बाट छोरिहरु पनि
प्रशासन अब बन्द गर अपराध हटाउन सक्दैन भने
सिमाना मिच्दैछ छिमेकीले तमासा हेर्दैछ सरकार
के काम तेत्रा सुरक्षाकर्मी ठाउमा खटाउन सक्दैन भने
कृर्षी क्रान्ति गर्छु भन्दै ठुला भाषण गर्थे नेता
के नेता भन्नु किसानको खेतमा पानि कटाउन सक्दैन भने /
Posted by ramkrishna at 12:45 AM No comments:
सुन्दैछु पराईको मनमा बसाई सर्दै छन् अरे
रामु'ले हिसाब चुक्ता नगरे आफै मर्दै छन् अरे
बिश्वास हट्न दिनेछैन प्रेमको अमर राख्नु छ मैले
मेरो सिन्दुर मेटाएर फेरि सिउदो भर्दै छन् अरे
म कसरि हेर्न सक्छु हे प्रभु Û पिडा कति दिन्छौ
डोली संगै उन्लाई बोकी जन्ती यतै झर्दै छन् अरे
हरे म आज कस्तो नराम्रो देखि रहेको छु सपनामा
अनायास प्रेममा पागल भयो भन्दै हल्ला छर्दै छन् अरे
यस्तो सपना देख्न नपरोस् भगवान् कसैलाई अब
प्रेम गर्नेलाई सरकारले राहात योजना गर्दै छन् अरे
Posted by ramkrishna at 10:42 PM No comments:
नेपालको साहित्यिक परिप्रेक्ष्यमा चितवन आज अग्रस्थान ओगट्न सफल छ । त्यसो त, अन्य जिल्लाहरु पनि कमजोर छैनन् । त्यसमा पनि चितवनको साहित्यिक उर्वर भूमिमा कविडाँडा निकै सक्रियताका साथ तीव्र गतिमा अघि लागिरहेको छ र राष्ट्रियस्तरमै चर्चामात्र होइन हस्तक्षेपसमेत गरिरहेको छ । कविडाँडाका प्रत्येक घरधुरीमा कवि, कथाकार, निबन्धकार, गजलकारहरुको प्रतिनिधित्व छ, नभएका घर बिरलै भेटिन्छन् ।
कविहरुको संख्या अधिक रुपमा रहेको भरतपुर नगरपालिका वडा नंं १३ भित्र पर्ने कल्याणपुर, आनन्दपुर, कैलाशनगर, रामबाग, गुलाफबाग, मंगलपुरका केही भाग र वडा नं. १४ मा पर्ने तोरीखेत र गाविस फूलबारी र श्रीपुर क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रुपमै सम्पूर्ण सर्जकहरुले ‘कविडाँडा’ नामकरण गरेका छन् ।
नारायणी नदीभन्दा दक्षिण र राप्ती नदीबाट उत्तरतर्फको क्यान्सर अस्पतालबाट चार किमी भित्रपट्टि पर्ने केही समथर भूभागभन्दा माथि उठेको र प्राकृतिक रुपले पनि निकै सुन्दर, हराभरा र हरियालीले आकर्षित गर्ने उक्त स्थान आज साहित्यिक जगत्मा असाध्यै चर्चित स्थान हो । साहित्यकारहरुको पुण्यभूमिका रुपमा समेत लिइने कविडाँडाको उपस्थिति अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत देखिन थालेको छ । पछिल्लो समयमा भएका साहित्यिक गतिविधिहरुले कविडाँडाको नामलाई पुष्टिसमेत गरेको देखिन्छ । कविडाँडाबाट नेपाली साहित्यलाई अगाडि बढाउनका निम्ति कम्मर कसेका पछिल्ला नवपुस्ताका सर्जक र कविडाँडालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा ल्याउन नेपाली साहित्यमा स्थापित रहेका वरिष्ठ स्रष्टाहरुको अतुलनीय योगदान छ । नेपाली साहित्यका केही प्रतिनिधि लेखकहरु कविडाँडामै बसोबास गर्छन् भन्दा गर्व बोध हुन्छ । धन्य छ कविडाँडा, जसले चर्चाको शिखरमा पुगेका लेखकहरुलाई आफूमा समाहित गरेको छ !
समग्र चितवनको इतिहास पल्टाउँदा कलानाथ अधिकारी र प्रेमविनोद नन्दन पछि २०३३ सालमा कविडाँडाका अनिल सिग्देलको ‘केही समालोचनात्मक रेखांकन’हरु चितवनकै पहिलो समालोचनात्मक कृतिका रुपमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । हालसम्म कविडाँडाबाट १०० भन्दा बढी कृतिहरु बाहिर आइसकेको पाइएको छ । अझ, दर्जनौँ साहित्यिक पत्रिकाहरु पनि प्रकाशित भएका छन्, यहाँबाट । केहीले त निरन्तरता पनि दिँदै आइरहेका छन् ।
यस्तो साहित्यिक महायज्ञमा सरिक भई कविडाँडालाई चर्चामा पु¥याउने चर्चित स्रष्टाहरु निम्न छन् ः
कवि तथा समालोचक अनिल सिग्देल, कवि डा. खुमनारायण पौडेल, कथाकार डा. हरिहर पौडेल, कवि तथा निबन्धकार सङ्गीत आयाम, समालोचक उदय अधिकारी, समालोचक पूर्णबहादुर अधिकारी, गजलकार गोपाल पौडेल, कवि सिर्जन अविरल, कथाकार सीताराम कोइराला, कथाकार एलबी क्षेत्री, कवि सुरेन्द्र अस्तफल, कवि गणेश शर्मा, कवि युवराज भुषाल, गजलकार सजल नयन, गजलकार मिथिला प्याकुरेल, गीतकार अर्जुन अस्तफल, गजलकार तथा समालोचक रमेश प्रभात, गजलकार युवराज अर्याल, कवि नवराज ढुंगाना, गजलकार रामकृष्ण पौडेल ‘अनायास’ लगायत धेरैले राष्ट्रियस्तरमै ख्याति कमाइसकेका छन् । यस्तो पुनीत अभियानमा बाहिरी जिल्लासँग कविडाँडाको सहकार्य रहँदै आएको छ, जसले चितवनसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ ।
समग्र चितवन जिल्लालाई साहित्य जगतले पूरै ढाक्ने वातावरणको लागि ठूलै भूमिका समेत खेलेको छ, कविडाँडाले । चितवनको साहित्यिक उन्नयनमा कविडाँडाको योगदानलाई केन्द्रबाट समेत सकारात्मक रुपले हेर्दै प्रशंसा गर्नेहरुको संख्यामा समेत अकल्पनीय रुपले वृद्धि भएको छ ।
यसरी समग्र चितवनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कविडाँडाले जन्माएका स्रष्टाहरु र ती स्रष्टाहरुका कृतिहरुलाई सरसरती नियाल्दा निम्न स्रष्टाहरुलाई यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ–
अनिल सिग्देल ः
जिल्लाकै समालोचना विधाका आरम्भकर्ता एवं खण्डकाव्य, लामो कविता तथा गद्यकवितामा कलम चलाएर पाँच दशक समयअगाडिदेखि कविडाँडामा बसी समग्र जिल्ला र देशमा समेत मह¤वपूर्ण स्थान बनाउन सफल कवि एवं समालोचक अनिल सिग्देलका प्रकाशित कृतिहरुमा ‘मिलन’ खण्डकाव्य (२०३३), ‘केही समालोचनात्मक रेखांकनहरु’ समालोचना (२०३३), ‘जीवन क्षितिज’ धारावाहिक लामो कविता हो भने राष्ट्रिय रुपमा केन्द्रबाट प्रकाशित भएका विभिन्न पत्रपत्रिका मधुपर्क, रुपरेखालगायत अन्य साहित्यिक पत्रिकाहरुमा पनि उनका रचनाहरु प्रकाशित भएको पाइन्छ ।
डा. खुमनारायण पौडेल ः
कविडाँडामा रही कविता विधामा राष्ट्रिय पहिचान बनाउन सफल डा. खुमनारायण पौडेल हाल राजधानीमा भएता पनि निरन्तर रुपमा साहित्यमा लागिरहेका छन् । यिनका कृतिहरु ‘अन्तिमेत्थम’
(२०४९) कवितासंग्रह, ‘नरमेध’
(२०५६) कवितासंग्रह हुन् ।
डा. हरिहर पौडेल ः
विशेषतः कथा विधामा राष्ट्रिय पहिचान बनाएका डा. हरिहर पौडेल कवितामा समेत अगाडि देखिन्छन् । उनका प्रकाशित कृतिहरुमा ‘इतिवृत्त’ (२०५१) कथासंग्रह, ‘कालो उज्यालो’ (२०६९) लघु कथासंग्रह, ‘अनुभ्रम प्रतिभ्रम’ (२०६६) लगायत छन् ।
सङ्गीत आयाम ः
लेखन तथा पत्रकारितामा उत्तिकै सक्रियता देखाउने सङ्गीत आयाम मूलतः राष्ट्रिय रुपमा लेखकका रुपमा बढी चर्चित छन् । आयामका रचनाहरुले देशैभर उज्यालो दिन सफल भएका छन् । कविता, निबन्ध, कथा, समीक्षा, गजलजस्ता विधामा करिब विगत ३० वर्षअघिदेखि सक्रियतापूर्वक कलम चलाउँदै आएका आयामका ‘चक्रव्यूह र युद्धपीडाहरु’ लामा कवितासंग्रह
(२०६२), ‘शरणार्थी उज्यालो’ कवितासंग्रह (२०६७) र हालसालै अत्यधिक चर्चामा आएको ‘दासहरुको कुम्भमेला’ निबन्धसंग्रह (२०७०) प्रकाशित कृतिहरु हुन् ।
गोपाल पौडेल ः
‘छातीभरि तिम्रो माया’ गीत–गजलसंग्रह २०५९ र ‘शब्दहरु अविराम यात्रामा’ (२०५७) प्रकाशित कृति रहेको देखिए पनि गोपाल पौडेलको साहित्यिक सक्रियता आजभोलि त्यति देखिँदैन । उनी पलायन नै भएका हुन् कि भन्ने महसुस भैरहेको अवस्थामा उनको सक्रियता कविडाँडाका लागि आवश्यक देखिन्छ ।
सिर्जन अविरल ः
चितवन जिल्लाको सञ्चारमाध्यममा निकै लोकप्रिय रहेका सिर्जन अविरल कविता कथा जीवनी आदिमा कलम चलाउने स्रष्टा हुन् । उनका प्रकाशित कृतिहरुमा ‘म आकाश हेरिरहेछु’ कवितासंग्रह (२०६१), ‘आदि गायक सेतुरामदेखि दिलमाया खातीसम्म’ जीवनीसंग्रह (२०६२) र ‘क्यान्टोनमेन्ट र अरु कविताहरु’ कवितासंग्रह (२०७०)
छन् । चितवनका कविहरुमा यिनको अलग पहिचान छ ।
एलबी क्षेत्री ः
कविडाँडा साहित्य समाजका संस्थापक अध्यक्ष रही कविडाँडाका अभिभावकका रुपमा ठूलो भूमिका खेलेका एलबी क्षेत्रीले शिक्षा र प्रशासनिक कार्यमा परिपक्व अनुभव बटुलेका छन् । क्षेत्रीको प्रकाशित कृति ‘त्रिशङ्कुको देशमा’ लघु कथासंग्रह (२०६४) हो भने नयाँ कवितासंग्रह छिटै नै बजारमा आउने तर्खरमा छ । मूलतः कथा विधामा अगाडि देखिएका उनका राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाहरुमा कथाहरु प्रकाशित भएका छन् । पछिल्लो समयमा कवितामा निकै सक्रियतापूर्वक उनी लागिरहेको देखिन्छ ।
सुरेन्द्र अस्तफल ः
कविडाँडामा रहँदै चितवनको गरिमामय संस्था चिसाप, नारायणी कला मन्दिर र अन्य संस्थामा रही कविडाँडाको समग्र साहित्यको विकासका निम्ति अगाडि बढेका अस्तफलको ‘बिम्बशिविर’ कवितासं्रग्रह, ‘शब्दहरु अविराम यात्रामा’ संयुक्त कवितासंग्रह प्रकाशित छ । उनी गीत, गजल, मुक्तक, समीक्षा विधामा पनि अगाडि देखिन्छन् ।
गणेश शर्मा ः
युवापुस्ताका क्रियाशील कवि अझ पछिल्लो समयमा विशेषगरी लघुकथामा दक्षता हासिल गरेका गणेश शर्माको ‘शब्द क्रान्ति’ २०६६ कवितासंग्रह प्रकाशित छ । उनी अहिले युवापुस्तामा सशक्त हस्ताक्षरका रुपमा देखिन पुगेका छन् ।
रमेश प्रभात ः
कविता, गजल, हाइकु र समालोचनामा सक्रियताका साथ कलम चलाउन सफल रमेश प्रभातले हाइकुसंग्रहसमेत प्रकाशित गरिसकेका छन् भने चितवनका साहित्यिक कृतिहरुको अभिरेखांकनसमेत प्रकाशित गरी सिंगो साहित्यिक फाँटमा राष्ट्रियताका साथ लागेका उनी गजल मञ्च चितवनका अध्यक्ष पदमा रही हाल चितवनको गजल क्षेत्रको विकासका निम्ति सक्रिय देखिन्छन् । उनको अन्य साहित्यिक संघसंस्थामा पनि सक्रियता रहेको पाइन्छ ।
सीताराम कोइराला ः
चितवन जिल्लाको गरिमामय पत्रिका ‘पल्लव’को प्रथम अंक आफैँ सम्पादन गरी अगाडि बढाएका कोइरालाले कथा विधामा कलम चलाउँदै ‘अनर्थ’ कथासंग्रह र ‘स्रष्टासँग संवाद’ प्रकाशित गरेका छन् । आफूलाई सफल साहित्यकर्मीका रुपमा उभ्याउन सफल रहेका उनको २०७१ मा ‘पागल प्रेमी र मेरो देश’ कवितासंग्रह बजारमा आएको छ ।
रामकृष्ण पौडेल ‘अनायास’ ः
चितवनका विभिन्न साहित्यिक संस्थामा क्रियाशील र संलग्न रहेका रामकृष्ण पौडेल ‘अनायास’ समर्पण साहित्य परिषद्का संस्थापक उपाध्यक्ष हुन् । चितवनको पहिलो कृतिका रुपमा गजलमा सवाल जवाफसंग्रह ‘धमिलिएका डोबहरु’ फुच्ची जमुनासँगको सहकार्यमा यिनले प्रकाशित गरेका छन् । उनी कथा, मुक्तक, कविताजस्ता विधामा पनि आफूलाई उभ्याउन सक्रिय रहेका छन् ।
शम्भु गिरी ‘निर्दोष जीवन’ ः
यिनले विविध विधामा कलम चलाए पनि सम्पूर्ण विधालाई एकै ठाउँमा राखी ‘आशीर्वाद’ नामक कृति प्रकाशित गरेका छन् ।
पूर्णबहादुर अधिकारी ः
संस्मरणसंग्रह ‘अनुभूतिका त्रिवेणी’ २०६६, र २०७० मा कथासंग्रह प्रकाशित गरेका पूर्णबहादुर अधिकारी विभिन्न नेपाली साहित्यका स्थापित स्रष्टा हुन् । उनी अरु विधामा पनि सक्रिय देखिन्छन् ।
कविडाँडालगायत सम्पूर्ण साहित्य जगतमा जल्दोबल्दो तवरले कलम चलाई साहित्यको उत्थानका निम्ति कम्मर कसेर लागेका अरु क्रियाशील कविडाँडाका सर्जकहरुलाई सरसरती हेर्दा निम्न छन् ः
– अर्जुन अस्तफल
– नवराज ढुंगाना
– सजल नयन
– कला पौडेल
– सुजन अनिमेस
– मन्जु पौडेल आदि ।
कविडाँडाको इतिहास हेर्ने हो भने २०३० सालअगाडिदेखि नै साहित्यिक क्षेत्रमा कृति प्रकाशितसमेत भएको पाइएको छ । यसमा अनिल सिग्देल र अन्य कविहरु रहेको पाइएको छ । उक्त समयपछि साहित्य सिर्जनामा जुर्मुराएका चालीसको दशकका स्रष्टाहरुमा टीकाराम सापकोटा, युवराज भुसाल, युवराज अर्याल, कृष्णप्रसाद सापकोटा आदिको नामलाई यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यही तवरले कविडाँडाको साहित्यलाई निकै अगाडिदेखि सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउन सफल व्यक्तित्वहरुमा २०४१ सालमा ‘समाजसेवा युवा क्लब’ खोली साहित्यको विकास गराएका राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी मुक्तिनाथ अधिकारी र उदयनाथ अधिकारी रहेको पाइन्छ भने २०४६ सालमा कविडाँडाका सालिकराम पौडेलद्वारा ‘दुर्गा युवा वाचनालय’ २०५१, ‘चितवन वाङ्मय प्रतिष्ठान’ २०५९, ‘अभिव्यञ्जना साहित्य प्रतिष्ठान’ २०५९, ‘समर्पण साहित्य परिषद्’ २०५९, ‘देवकोटा अध्ययन केन्द्र’ २०६०, कविडाँडा साहित्य समाज आदि रहेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, पत्रपत्रिकामा २०३३ सालमा अनिल सिग्देलद्वारा सम्पादित ‘बुलबुल’ पत्रिका (२०५१), ‘मधुलिका’ (२०५७), सौदामिनी (२०५९), ‘सिरेटो’ साहित्यिक पत्रिका (२०६०), ‘अभिव्यञ्जना’, ‘चरैवेति’ र सीतारमा कोइरालाद्वारा सम्पादित भएको ‘पल्लव’ साहित्यिक पत्रिकाको पहिलो अंक २०५२ कथासंग्रह विशेषांकका रुपमा कविडाँडाबाट प्रकाशित प्रत्रिकाहरु हुन् । हाल ‘चरैवेति’, ‘अभिव्यञ्जना’, ‘पल्लव’लगायत कविडाँडाबाट प्रकाशित अरु पत्रपत्रिकाले देशव्यापी रुपमा चर्चा कमाउन सफल बनेका छन् ।
चितवन हाल साहित्यमा निकै अगाडि देखिएको छ । चितवनको साहित्यको विकासका निम्ति कविडाँडाबाट पनि उत्तिकै लागिरहेका स्रष्टाहरु दर्जनौँको संख्यामा छन् । त्यसमध्ये त कयौँ स्रष्टाहरुको योगदानलाई निकै प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पचासको दशक र साठीको दशकमा कविडाँडामा देखिएका अरु स्रष्टाहरु निम्नअनुसार छन् ः
रवीन्द्र लामिछाने, एमएन निशा, स्व. लोकेश अन्जान, प्रकाश प्राञ्जल, नवीन न्यौपाने, गायत्री अधिकारी, यादव सापकोटा, नारायण खनाल, सीताराम बुबा, विश्व न्यौपाने, प्राध्यापक कृष्णप्रसाद सापकोटा, अर्जुन पौडेल, दीक्षा सापकोटा, दीपेन्द्र अधिकारी, कला पौडेललगायत अन्य स्रष्टाहरु पनि कविडाँडाकै उपज हुन् ।
अझ विशेषतः गजल विधामा नै निकै क्रियाशील स्रष्टामा शिव सापकोटा, सरिना, सृजन अनिमेष, प्रतिमा अधिकारी, बसुन्धरा गौतम, रश्मीलता प्याकुरेल, लक्ष्मण भुजेल, शारदा चौलागाईं, अन्जु आदि युवापुस्ताका स्रष्टाहरु समेत रहेका छन् ।
नेपालको साहित्यमा चितवनको कविडाँडामा जन्मिएर कविडाँडालगायत जुनसुकै स्थानमा रहिआए पनि चितवनको साहित्यमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरी साहित्यको उत्थानका लागि क्रियाशील यहाँका पाका, नयाँ स्रष्टाहरुले ठूलो योगदान दिएका
छन् । चितवनका गरिमामय साहित्यिक संस्था, साहित्यिक पत्रिका र अन्य संघसंस्थामा रही प्रशासनिक कार्य गरी कविडाँडालाई चर्चामा पु¥याउन सफलसमेत भएका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी पत्रिका र १०० भन्दा बढी कृतिसमेतको प्रकाशनले पनि कविडाँडालाई असाध्यै सफल ठाउँ मान्न सकिन्छ ।
अघिल्लो समयमा जुन उत्साह देखिएको थियो, त्योभन्दा बढी उत्साह पछिल्लो समयमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । साहित्यमा बाढीपहिरो नै ल्याउन सफल आजका युवा स्रष्टाहरु निकै क्रियाशील भई लागिपरेका देखिन्छन् । आगामी दिनमा साहित्यमा अझ जोड दिने हो भने कविडाँडाको साहित्यिक भविष्य सधैँका लागि इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा लेखिने निश्चित छ ।
Posted by ramkrishna at 8:47 PM No comments:
आदि हाँसो आदि खुशी यस्तै यस्तै म'ता /
दुख ले रुदै झरेको आँशु बुझाउ कसरि
नमान्नु दुख परेली तिम्रो रुझाउ कसरि 2
उधारो माया दिएर सागर तरेर जानेलाई
के भन्न सक्छु उदास यो मन गरेर जाने लाइ
जसलाई भनेनी घट्दैन ब्यथा 2
Posted by ramkrishna at 2:48 AM No comments:
तिहार लागेको जस्तो छ !!
सयपत्री मखमली फुल ढकमक्क फुल्दाखेरी
आएजस्तै लाग्यो तिहार धानका बाला झुल्दाखेरी
याद आउछ अझै पनि हाम्रो माया जोडिएको
देउसी खेल्न गाउँमा गइ संगै हामी डुल्दाखेरि /
(तस्बिर -ममता अर्याल )
Posted by ramkrishna at 2:25 AM No comments:
छोरी ले यो तिहारमा जामा ल्याइदे भन्थी
श्रीमतीले ला'को धोति कति भयो गन्थी
जाँगे फाट्यो बा-बा भन्दै छोरो पनि रुन्छ
कान्छी छोरी जुत्ता चाहियो भन्दै जरो खन्थी
दमले चाप्यो ओखति ल्याइदे भन्दा आमा
स्कट चाहियो भन्दै घुम्छे बैनी फन फन्ती
Posted by ramkrishna at 2:19 AM No comments:
सपना लुटेर रमाउछ काठमान्डू
महंगी बढाउदै कमाउछ काठमान्डू
आफु स्वतन्त्र छ र त गर्छ अत्यचार
गरिबलाई मात्रा कानुन लगाउछ काठमान्डू
सडक देखि सदन सम्म उसकै अधिकार
निर्धोलाई बस्नै दिन्न भगाउछ काठमान्डू
करोडौ लुटेर संबिधान दिन नसक्दा
अब जनतालाई के थमाउछ काठमान्डू
अत्याचारी भ्रष्ट्रचारी जन्माउदै बर्षे पिच्छे
आफ्नो मात्र अधिकार जमाउछ काठमान्डू
Posted by ramkrishna at 2:13 AM No comments:
विश्व् साइकलयात्री पुष्कर शाहको यात्रा सस्मरणमा समेटिएका केहि रोचक कुरा
उनले घुमेका विभिन्न देशमा भोगेका कथा व्यथा समेटिएको उक्त पुस्तकका दुई वटा अंश हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं ।
दुई डलरको बन बोकेर अर्की तरूनी आइपुगी। मैले टोकेको जुठो बन दुइटीले खोसाखोस गरेर खाए। त्यसपछि एउटीले मेरो टी–सर्ट उतारी। मेरो शरीरका अङ्गहरु देखेर सोधी, “बडीबिल्डर हो कि क्या हो?”
उनीहरुले उधारो सेक्स गर्न आग्रह गरे। म 'मनाना' भन्दै लुगा लगाएर त्यहा“बाट निस्किए
Posted by ramkrishna at 9:45 PM No comments:
मदनपुरस्कार विजेताले देखेको जुम्ला
सबभन्दा अग्लो ठाउँमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय छ । अलि तल सैनिक ब्यारेक । त्यो भन्दा होेचोमा एयरपोर्ट । धावनमार्गसँगै दाङ साँघुतिरबाट बग्दै आउँछ तिला नदी । अनि एयरपोर्ट, कर्णाली प्राविधिक स्कुल र महत गाउँ तीनतिरबाट भिरालो हुँदै उपत्यकाजस्तो सम्म ठाउँमा बसेको छ सानो बजार । यही हो, कर्णाली अञ्चल सदरमुकाम खलंगा (जुम्ला) को मोटामोटी भूगोल ।
हुन त सबै ठाउँको समाज, संस्कृति र रहन-सहनको आ-आफ्नै विशेषता हुन्छ । त्यसमा पनि जुम्लाको खास छ । यहाँ वर्षैभरि साना-ठूला चाडपर्व निरन्तर चलिरहन्छन् । सैनिक जात्रा, रोपाइँजात्रा, अरु के के हो के-के ? जात्रा र पर्वको संख्यामात्रै गन्ने हो भने राजधानी काठमाडौंसँगै निकै नजिक छ जुम्ला । मनाउने तौरतरिकामा भने धर्ती र जूनजत्तिकै अन्तर होला ।
काठमाडौमा सानोसानो पर्व दुलही भित्राएजत्तिकै धुमधामसँग मनाएको मैले देखेको छु । यहाँ भने दुलही अन्माउन लागेजस्तो रौनकविहीन हुन्छ । दुर्गम बसाईको भाडा हो वा जन्मजात गरिबीको कर तिरिरहेका छन् जुम्लीहरु ।
चाडपर्वमा पनि कसैको मुहार फक्रिएको मैले देखिनँ । कहिलेकाहीं यस्तो लाग्छ, जुम्लाका पर्व जम्मै औंलामा गन्न सकिने धनीहरुको निम्ति मात्रै त होइनन् ?
जातकै आधारमा ‘पोसिएका’ र ‘ठगिएका’ भनी वर्गीकरण गर्नेले एकचोटि जुम्ला आएर हेरे हुन्छ । यहाँ सुविधाबाट ठगिएकाहरु जम्मै दलित वा कथित तल्लो जातका छैनन् ।
माथिल्लो जात र राज्यस्रोतबाट पोसिएको भनिएका बाहुन, क्षेत्री पनि थुप्रै छन्, जो पेट भर्ने गाँस र आङ ढाक्ने एकसरो लुगाको निम्ति रगत-पसीना बगाउँछन् । जनगणनाको तथ्याङक केलाएर भनेको होइन, तर मेरो अनुभवमा जुम्लामा बाहुन, क्षेत्री र दलितकै बाहुल्य छ । मगुबाट बसाइ सरेर आएका मुगाली पनि छन् । यीमध्ये मैले भेटेका धेरै गरीबै छन् ।
अचेल पनि चन्दननाथ र भैरवनाथमा उत्तिकै आस्था छ जुम्लीहरुको । दसैंको बेला दुबै मन्दिरमा लिंगो फेर्ने चलन रहेछ । बडो रमाइलो हुन्छ, लिंगो फेरेको हेर्न । चन्दननाथ बाबालाई त साक्षात भगवानै मानिन्छ । यहाँ जसले जे माग्यो, पूरा हुने विश्वास छ ।
उनीहरुले कति पुस्तादेखि कतिथोक माग्दै आए होलान् । खै पूरा भए कि भएनन्, म जान्दिँन । माग्न भने छाडेका छैनन् ।
दसैं नआउँदै असोजबाटै जाडो सुरु हुँदोरहेछ । तिहार सकिएपछि मंसिरदेखि चैतसम्मै हिउँ पर्ने । बिहान-बिहान बाहिर हिँड्दा ठाउँ-ठाउँमा बरफ जमेको मैले पनि देखें ।
जिन्दगीमा पहिलोचोटि राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे देखेको जुम्लामै हो । डाँफे पनि देखें, मारेर खाएको पनि देखें । हिउँ पर्न थालेपछि पन्छीहरु सुरक्षित बास खोज्दै बस्तीतिर आउँदा रहेछन् । त्यहीबेला सिकार गर्ने । सिकार गर्नेचाहिँ को भने, सिकारीलाई समातेर कारबाही गर्नेहरु नै । डाँफेको मासु पकाएर भोज खाने गरेको सुनें, जुन मलाई मन परेन ।
हामी नेपाली भाग्यवाद र रुढीवादका दीर्घरोगी हौं । समाजसेवी डोरबहादुर विष्टले यसमाथि सोध नै गरेका छन् । पूर्वको ताप्लेजुङ होस् वा पश्चिमको जुम्ला, यो रोगबाट कोही अछुतो छैन । खाली मात्राको फरक हो । जुम्ला अलि बढी नै ग्रसित भएको मैले अनुभव गरें ।
पुरुष आफू भने ठाँट्टएिर बजार चहार्छन्, घरमा श्रीमती, आमा र छोरीहरु हातगोडा चर्चरी फुट्ने गरी काममा जोतिएका हुन्छन् । बाहिर ठूल्ठूला कुरा गर्ने नेता, हाकिम, पत्रकार र नर्स पनि छाउपडी मान्दा रहेछन् ।
महिनावारि हुँदा भात, दूध, माछामासु खान नहुने रे ! मन्दिर त भन्नै परेन । हेर्दा पनि पाप लाग्छ कि जस्तो गरेर तीन कोष परै बस्छन् ।
जुम्लाको रीतिरिवाज म त रन्थनिएँ । रातमा पनि आकाश उज्यालिने यो बेला निस्पट्ट अध्याँरोमा बाँचिरहेको छ जुम्ला । बत्तीको अध्याँरो हैन, ज्ञानको अँध्यारो । चेतनाको अँध्यारो ।
जुम्लामा सरकारले सहुलियतमा दिएको चामलबाट जाँडरक्सी बनाइन्छ
सायद वर्षौंदेखिको अँध्यारोले ब्यग्र मन भुलाउन हो कि, चुइँगम अति चपाउँदा रहेछन् । महिलाले पनि प्याट्ट-प्याट्ट चुइँगम पड्काउँदै आफूजत्रै ढुंगाको भारी बोकेको मैले देखें । आफूभित्र गुम्सिएको आक्रोशलाई दाँतले किचिमिची पार्दै हल्का हुन त होइन ?
हल्का हुने अर्को पनि खुबै चल्छ यहाँ । मदिरा सेवन । घरमै बनाएको लोकलदेखि सुर्खेत र नेपालगञ्जतिरबापट आउने सिलबन्दी रक्सीसम्मको माग छ । कर्मचारीहरु बिहानै टिल्ल परेर अफिस आएको मैले देखेकी छु । रमरम हुँदै ड्युटीमा बसेका प्रहरी भेटेकी छु । धान राम्ररी फल्दैन । भोकमरीले जनता मर्छन् ।
सरकारले सहुलियतमा दिएको चामलबाट भने जाँडरक्सी बनाइन्छ । यसलाई चेतनाको कमी भन्ने कि परनिर्भरताको पराकाष्ठा ?
यहाँको अर्को समस्या हो, सरकारी कर्मचारी नबस्नु । कुनै न कुनै भ्रमण, काज वा तालिम मिलाउँछन्, अनि नेपालगञ्ज, सुर्खेत वा काठमाडौ झरिहाल्छन् । निमित्तको भरमा कार्यालय चल्छ ।
कहिलेकाहीं त त्यही निमित्त पनि हुँदैन । उसको सट्टामा आउने निमित्तले कार्यालय धान्नुपर्छ । दसैं मान्न घर गएका साथीहरु फागुनतिर मात्र उक्लेको मैले भेटेकी छु ।
जहाजको टिकटदेखि अस्पतालको उपचार र व्यवसायदेखि ठेक्कापट्टासम्म हुनेखानेकै आधिपत्य छ ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेझैं गरिबी, अशिक्षा, भोक, रुढीवाद र सामन्ती संस्कारले थिलाथिलो पारेको जुम्लालाई प्रकृतिले भने आफ्नो झोली नै फुकाइदिएकी छन् ।
यहाँ बहुमूल्य यार्चागुम्बा छ । गुची च्याउ छ । र, अरु थुप्रै प्राकृतिक जडिबुटी छन्, जुन हाम्रा अज्ञान आँखाले ठम्याउँन सकिरहेका छैनन् ।
यार्चागुम्बा त जुम्लाको सुन भइहाल्यो । यसमा सरसापटै चल्छ । यार्चाको मौसम आएपछि तिरौंला भनेर ऋण लिने चलनै छ । यसो गर्दा बजार भाउ पाउन गाह्रो हुँदोरहेछ । एक त्यान्द्रो यार्चालाई ४७ रुपैंयाँ हालेर मैले नै किनें ।
गुची च्याउ पनि सानो टुक्राकै १० देखि १५ रुपैंयाँ पर्दोरहेछ । यही च्याउ नेपालगञ्ज पुग्दासम्म किलोको १० हजार, दिल्लीमा १५ हजार र जापानमा २० हजार रुपैंयाँ पर्छ भनेर स्थानीयहरु भन्थे ।
यतिका खुबी छन्, जुम्लामा । तैपनि हामी यसको चर्चा किन गर्दैनौं ? किन खाली जुम्लाका नराम्रा कुरा बाहिर आउँछन्, राम्रा कुरा दबिएरै बस्छन् ? किन हामी सगरमाथा र लुम्बिनीमा मात्र देशको गौरव खोज्छौं ?
के यार्चागुम्बा हाम्रो गौरव होइन ? जुम्लाको जडिबुटीखानी अरबको तेलखानी जत्तिकै बहुमूल्य छैन र ?
जतिजति यहाँ बस्दै गएँ, जतिजति भिज्दै गएँ, त्यति त्यति मलाई बोध भयो, जुम्ला गरिब भनेको त कहाँ पाएर गरिब हुनु ? यो त धनी हो, नेपालकै धनी ।
जुम्लाले मेरो जीवनलाई नयाँ दिशा दियो ।
(यस वर्षको मदनपुरस्कार बिजेता राधा पौडेलको ‘खलंगामा हमला’ पुस्तकको एक अंश)
Posted by ramkrishna at 2:47 AM No comments:
बडा दशैं २०७१ को हार्दिक शुभकामना !!!"
"विजया दशमी २०७१ को शुभ अवसरमा नयाँ आशा,उत्साह अनि उमंग पलाओस्,निरन्तर सफलताले शिखर चुमिरहोस् ,हिम्मत अठोट र आत्मबिश्वास जागोस् , सुख ,शान्ति ,सम्वृदी सुस्वास्थ्य उत्तरोत्तर प्रगति एंव दिर्घायूको कल्याण होस भन्ने आकांक्षाका साथमा मेरो तर्फ बाट यहाँहरू सबै लाई बडा दशैं २०७१ को हार्दिक शुभकामना !!!"
Posted by ramkrishna at 11:11 PM No comments:
Labels: बडा दशैं २०७० को हार्दिक शुभकामना !!!"
दु:ख संगै उदाएको
मेरी आमाको कहानी
साँझा सम्म पनि आफ्ना पसिना
खडेरीले सुकेर पट्पटि फुटेका
बाँझो बारीमा आफ्नो शरिर बाट
निस्केको पसिनाको नारायणीले
संचित गरेर दस नङग्राले
आलीको कान्लामा ठुसुक्क नगरी
घाम ओढार परेपछि
ढोको संगै सपना बोकेर
उही प्रिय गोरेटो हुदै
भोलिको दिनको कल्पना गर्दै
पुन फर्किन्छिन आफ्नै घर
दलिन सम्म पुग्दा नपुग्दै
च्यातिएको गुन्यु चारैतिरबाट
तानातान गर्दै छातीमै टाँसिएका
स्तन भेट्न हानथाप गर्छन
दिनभरी एकमुठी परालले पेट भरि
मालिक्नी आउने बाटो हेरेर बसेका
मेरी आमाको आवाज संगै
एकोहोरो कराउन थाल्छन /
परानले मात्र धानिएकी
मेरी बृद्धा हजुरआमा
बुहारी आएपछि औषधि खानपाउने आशामा
मझेरीमा पटुकीको सिरानी राखेर
लामो सुस्केरा संगै सुतिरहेकी छन् ,
दु:ख र बेदनाले भरिएका
कहानीहरु हृदयमा सजाउदै
आँखाबाट खसेका मूलले
प्यास मेटाउदै कैयौ चोटी
आफ्नो र परिवारको
प्राणको भिक माग्दै
कैयौ रात हरु बिताई रहेकीछन्
Posted by ramkrishna at 9:44 PM No comments:
Posted by ramkrishna at 12:42 AM No comments:
एक हुल मुन्द्रेहरुको बथान
थोरै अस्लिन शब्दहरु मिसाउदै
पैताला भेट्नै लागेको कट्टु समाएर
जंगल सफारी लज भित्र
प्रवेश गर्छन् /
अनुहारमा धेरै चिन्ताको कालो दाग
टाढै बाट टल्किरहेको देखिन्छ,
"पोहोर सालको दशैं त झुर भयो
तर त्यो भन्दा एड्भान्स बनाउन
यो साल स्मरणीय
बनाउदैछौ सुमन दाई" /
सायद समुहको उँ नाइके हुनु पर्छ,
सुमन दाईलाइ चन्दाको बिल थमाउदै
भन्दै थियो "बिषय दुर्गा पुजा राख्नुहोस दाई",
तर प्रयोग सिर्जनात्मक काममा नै हुने छ '',
सायद दशैं नजिकिदै भएर होला
बिषय बस्तुको शीर्षक दुर्गा पुजा जुरेको
सुमन दाईको अनुहारमा
अटुट राप्तिहरु बगिरहेका छन्
दुर्गा,शिब,राम,लक्ष्मी लगाएत कैयौ
रसिदमा चन्दाको भेटि चदाउदा /
यहाँ पुजा निरन्तर चलिरहन्छ
जिर्णोंद्दार भएको मन्दिर निर्माणका लागि
स्रोत खोजीको प्रस्ताव उपर
प्रत्येक दिन होटेल क्याफेमा
बिदेशी अमृत लिदै
गम्भिर चिन्तन संगै
ठुलै बहसमा सदियौ देखि
Posted by ramkrishna at 11:33 PM No comments:
यी मान्छेहरूको लस्कर सम्झेर ।
रोकिन्छन् पाइला सफर सम्झेर ।।
झरी परे पछि मन पोल्न थाल्छ ।
बुढी आमा र चुहिने घर सम्झेर ।।
कहिले ठोकिन्छु कहिले टुक्रिन्छु ।
अचम्म लाग्छ यो खप्पर सम्झेर ।।
माझीको जिन्दगी नाउमै बित्यो ।
कोही पनि फर्केनन् बगर सम्झेर ।।
मैले फूलै फूलको उपहार पठाएँ ।।
उनले मिल्काइदिइन् पत्थर सम्झेर ।।
Posted by ramkrishna at 10:40 PM No comments:
Labels: स्रष्टाको रचना
हज़ज़[बिधाता]बहरमा एउटा गज़ल :-
हजारौं नाममा एउटा छ प्यारो नाम सम्झन्छु !
गज़लको बन्दना गर्दै म मोतीराम सम्झन्छु !
कतै एकान्तमा पर्दा मलाई aपीर लाग्दैन ,
म संगै साथमा हिंडने युवाको लाम सम्झन्छु !
कहाँ भौंतारिंदै जानु र गोता के भनी खानु ,
म मैले पूजने माटो धराकै धाम सम्झन्छु !
तुवाँलोले अँधेरोले कहाँ छेकेर छेकिन्थ्यो ,
म तिम्रो सम्झनालाई न डुब्ने घाम सम्झन्छु !
हमेशा मात दी ठग्ने मदीरा के गरूँ मैले ,
नशा हो सिर्जना मेरो गज़ल हो जाम सम्झन्छु !
अरू पालो गरी आए खडेरी चैं मिची आयो ,
अझै पत्तो न लागेको बसन्ती याम सम्झन्छु !
उसैको चोटले गर्दा छ आफै घाइते किन्तु ,
शहरमै जिन्दगी छर्ने गरेको गाम सम्झन्छु !
पराइ स्वार्थमा जीवन दिनेको नाम के बिर्सुं ,
चिठीको नाममा शूली सकार्ने खाम सम्झन्छु !
कुनै केही कुरा आफ्नो भनेको ठाउँमा छैन ,
यहाँ आराम के सम्झुं छ धेरै काम सम्झन्छु !!!!
Posted by ramkrishna at 10:18 PM No comments:
अर्जुन दृष्टि पौडेल
म वहार बनेर
तिम्रो जिन्दगीमा आएको थिए
झरेको फूल सम्झेर
मलाई कुल्चीदियौं÷पाउमा राखी दियौं ।
म तिम्रो नयनमा बसेको थिए
आशुले पखालेर वगाई दियौं ।
अव म तिम्रै ढुकढुकीमा वसीरहेको छु
सक्छौ भने हटाउ यहाँवाट पनि
तिम्ले फेर्ने सास रोकेर ।।
Posted by ramkrishna at 9:38 PM No comments:
विवश एस.बि चौलागाईं
कहीले चिसोसिरेटो बनेर
कहीले झम झमी बर्खे झरी झै
पुर्णीमाको रातमा बगरका ढुङ्गा
टल्क टल्के झै
थकित बटुवाको थकान मट्ने
कसैलाई जिउने आधार
कसैलाई पिउने आधार
तराईको फाट फाटमा
पहाडको टाकुरा टाकुरीमा
विश्वको सबोच्च शिखर बनेर
बस्ती बस्तीमा कवि मेरो
अस्मीता छेकीदेउन तिम्रा
ति शुन्दर शब्दले रङ्गीएको
पाना पानाले भन्दै
सुन्दैछु चारकोसेका मृगशाबक हरु
लन्च डिनर गर्न शहर पस्दैछन
आज नागबेली यार्सागुम्बा फल्ने ठाउमा
भोली चिल्ला चिप्ला मोटर गुड्ने छन
धुवॉको मुस्लो छोड्दै
तिमि आजको फोटो कैदगर
अनी भोली पल्टाएर हेर
सोच फरक के पायौ?
तिमि कविता भन्दा धेरै
मेरो स्याहार सुसार गर
हो कवि फेरि पछुताउने छौ
उनले त बिन्ती गरेकी थिइन भन्दै
नत्र जलीरहेको मरुभुमीमा
तिर्खाएको उंट झै
बौलाउन पर्ला प्रकृति प्रकृति भन्दै
कवि मेरो बेदनाको कविता लेख
Posted by ramkrishna at 9:50 PM No comments:
राष्ट्रियस्तरमा हस्तक्षेप गर्ने कविडाँडाका स्रष्टा...
विश्व् साइकलयात्री पुष्कर शाहको यात्रा सस्मरणमा सम...